Midkee Wanaagsan Cristiano Ronaldo Iyo Lionel Messi? Fabio Capello Oo Si Caddaalad Ah U Kala Saaray – Cadalool.com
March 14, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Cristiano Ronaldo iyo Lionel Meessi ayaa mar kale toddobaadkan muujiyey inay yihiin ciyaaryahannada dunida ugu wanaagsan ee aanay jirin cid la barbar-dhigo oo cahdigan nool.
Ronaldo ayaa soo baabi’iyey Atletico Madrid oo uu saddexlay kasoo dhaliyey Salaasadii, kooxdiisa Juventusna ugu diray wareegga siddeed dhamaadka Champions League.
Maalintii xigtay Lionel Messi ayaa ka hadlay bandhiggaas cajiibka ah ee Cristiano Ronaldo oo ku tilmaamay ‘Habeen Mucjiso ahaa’, laakiin jawaab kale oo ficil ah ayuu Messi bixiyey, waxaana uu labaley ka dhaliyey Lyon oo ugu timid Camp Nou.
Waxa halkaas dib uga bilaabantay dooddii ahayd ‘Midkee Wanaagsan Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo’.
Sidii marka horeba la arki jiray, waxay dooddu ka bilaabantay warbaahinta, waxay uga gudubtay taageereyaasha iyo khubarada ciyaaraha oo ay usii dheeftay tababareyaasha.
Tababarihii hore ee kooxaha Real Madrid, Roma iyo Juventus ee Fabio Capello oo waqti hore doodda labadan ciyaartoy soo galay, ayaa mar kale dib ugu soo laabtay.
Capello oo u waramay telefishanka Sky Sports Italia, ayaa waxa uu Ronaldo ku tilmaamay ciyaartoy aan caadi ahayn, halka Messi uu ku sifeeyey caaqil, waxaanu yidhi: “Ronaldo waa ciyaaryahan aan caadi ahayn, laakiin Messi waa mucjiso. Dunida saddex mucjiso ayaa soo maray waana Pele, Maradona iyo Messi. Muddadaas, Ronaldo oo ah ciyaartoy aad u xooggan ayaa idiin ogolaaday inaad wax walba ku guuleysataan, laakiin Messi waa ciyaartoy caqli badan oo wax kale ah.”
Fabio Capello waxa uu sheegay in Lionel Messi uu la kulmay markii ay da’diisu ahayd 16 jirka, isla xilligaasna uu samaynayey wixii uu 20 jirka ku samaynayey, waxaanu yidhi: “Waxaan la kulmay Messi markii uu jiray 16 sannadood, waanan la yaabay. Sidii uu markaas wax u samaynayey ayuu maantana u samaynayaa, laakiin 20 sannadood ayuu ka yaraa sababtoo ah wuxuu u dhashay caqli.
“Wuxuu wax u ikhtiraacaa si aanay kuwa kale arkayn. Ronaldo naftiisa wuxuu ka dhigay mid guuleysata, laakiin maaha nin caqli badan.”
Nuxurka hadalka Capello ayaa waxa uu ku soo ururayaa in Messi uu leeyahay xirfad dabiici ah, halka Ronaldo uu u shaqeeyo si adag oo aanay dadka kale karaynin, taasina ka dhigtay xiddig sare.